Ahoana no fomba hanapahanao ny lohasaha havanana | HVC Capacitor-Fampitana tsipika hafanana avoakan-tsoavaly 丨 Doorknob Capacitor 丨 Torohevitra vaventy be dia be
Ahoana no hanapa-kevitra amin'ny The Right Toaster
Janoary 14, 2017
Io no fanomezana fampakaram-bady tonga lafatra, ny fanomezan'ny angano ho an'ny fanokafana kaonty banky vaovao ary na dia ny kintana amin'ny sarimihetsika mirindra aza. Toaka kely toakao ianao dia tsy maintsy fitaovana an-dakozia.
Raha vao jerena dia fitaovana tsotra io. Manamboatra mofo izy ary mamoaka azy. Saingy, ny fomba ahoana no hanaovana an'io? Ahoana no fomba fiasa samihafa? Ary ahoana no ahafahany manaparitaka ny mofo izay vita rehefa vita?
Toeram-pivarotana fototra iray dia azo alaina any amin'ny fivarotana fihenam-bidy mandritra ny roapolo dolara. Ny ankamaroan'ny dia manana toerana ahafahana mamantatra anao hoe maizina ny tianao. Ny ankamaroany koa dia manisy mofo roa. Amin'ny alàlan'ny fampielezan'ny infra-infraela dia hanafoana ny mofonao ny mofomamy. Ho hitanao fa mibontsina sy mafana ny vainafo, izany no taratra tsy miova, izay mikosoka moramora ny rano.
Ny be mpampiasa matetika dia mampiasa tariby nichrome mipetaka etsy sy eroa manerana ny takelaka mika mba hamoronana taratra infra-mihena. Ny allie-nela sy chromium, tariby nichrome dia manana hery manohitra herinaratra avo lenta ary tsy miandrona rehefa mafana. Toeram-panalaovanana tsotra dia hanana lamban-goavam-be roa mamatotra ao anaty tariby nichrome napetraka mba hanamboarana slot iray mirefy iray santimetatra. Azonao atao ny mahazo modely misy varavarana misokatra maro hafa toy ny harona. Mifandray fotsiny amin'ny tariby ny tariby.
Misy karazany telo ny tolo-batana. Ny voalohany dia ny manual. Raha ny hevitry ny tena fototra dia azonao atao ny mametaka ny mpanao mofo, manafana ny mofo, mandrotsaha ny tapa-mofo ary mamadika azy hanala ny mofo. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana an'io karazana faharetana io ary tsy te hiatrika ireo tsy tokony hitranga amin'ny fihenan-mofo izay mety hianjera miaraka amin'ny mofo. Ny toasters manual dia mitongilana ary ny mofo dia apetraka fotsiny amin'ny fonosana fisaka izay atodinanao an-tànana mametaka ny ilany. Amin'ny toera-mofo iray dia mitsara ianao rehefa vita ny mofo. Midika izany fa tsy maintsy mijery azy ianao mba hialana amin'ny henan-kena.
Ireo toasters Semi-automatique dia manana endri-javatra toy ny lakolosy iray mba hilaza aminao ny vonona ny mofo. Ity modely ity koa dia mety hilaza aminao ny fotoana anaovana ny mofo, fa tsy hampiditra ny endri-pandrindra. Fa ny ankamaroan'ny toasters semi-automatique dia manana dial fanaraha-maso ka afaka manitsy ny toerana misy ny haizina tianao ianao.
Betsaka ny karazany maro amin'ny tolo-batana otomatis, fa ny ankamaroany dia manana endri-javatra fototra mitovy. Tahaka ny manual sy semi-automatique ny herinaratra ankehitriny amin'ny fampandehanana ny mofo. Saingy ireo modely ireo amin'ny ankapobeny dia misy endri-javatra roa hafa. Paingina vita avy amin'ny lohataona no mitsangantsangana ny mofo rehefa vita. Ny mpanamory iray dia manodina ny toaster ary manala ny dàra.
Zavatra fototra telo tsy maintsy hitranga mba hahazoana anao ny mofo. Ny mekanisma dia mila mihazona ny mofomamy sy ao anaty lalàla mandritra ny fotoana maharitra mandra-panafana azy tsara. Tsy maintsy mila mankany amin'ny tariby ny nichrome ny hery. Ary ny mpamaky iray dia tsy maintsy mamoaka ilay mekanika mitazona ny sakao.
Amin'ny tosterro iray fototra, ny mekanika dia miasa toy izao: Rehefa manosika ny entanao ianao, dia misy tsipika plastika manery ny fifandraisana ary ny hery dia ampiharina amin'ny biraon'ny circuit. Ny herin'ny 120-volt dia mandeha mivantana amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tariby nichrome, mitifitra ny taratra infrainiera hanaovana mofo. Elektronika dia mahazo hery avy amina circuitistista, mpanohitra ary ny capacitor mitazona ny mofo hahasarika ny metaly ary mitazona ilay mofo ao amin'ny mpanendaka. Ny faritra ihany koa dia miasa toy ny fameram-potoana. Rehefa tonga amin'ny volavolan-jotra iray ny volonta iray dia manapaka ny herin'ny elektromagnet. Ny lohataona dia mitsangatsangana rantsankazo na tapa-mofo.
Atao sakafo maraina.
Lawrence Reaves dia manoratra ho an'ny Hamilton Beach, orinasa amin'ny kojakoja an-dakozia manana safidy maro an'ny toasters sy vokatra hafa ao anatin'izany ny mpahandro sy ny mpanao mofo. Raha mila fanazavana hafa momba ny vokatra sasany dia mitsidika ity tranokala eto ity.
Janoary 19, 2017
ciroceanint@gmail.com High Voltage Resistors manapa-kevitra, Right, Toaster
Fikojakojana tahirin-tsakafo mavesatra kokoa sy tranokely lehibe Janoary 13, 2017
Amin'ny alàlan'ny olvegrn tahirin-tsarimihetsika mangatsiaka kokoa ...